रक्सी पिउनेलाई देखिन सक्छ यी छालाका समस्या
डा कमलराज धिताल
२o७५ पौष ३० सोमबार| प्रकाशित १४:३९:oo
कुरा केही समय अगाडिको हो । म वार्डमा बिरामी हेर्दै थिएँ । बिरामीको रोग थियो, ‘अल्कोहोल विथ्ड्र्वल सिन्ड्रोम’ बिरामीका आफन्तले सोध्नुभयो– यो घाँटी, हात र खुट्टामा आएको एलर्जी के हो डाक्टरसाब? म उत्तर दिन मात्र के लागेको थिएँ, बिरामीले एकदमै बेखुसी पाराले भने– यो पनि रक्सीकै कारणले भएको होला नि होइन डाक्टरसाब ? कलेजोको समस्या, आँखाको समस्या, नशाको समस्या रक्सीले हो भन्दा–भन्दा उनलाई दिक्क लागेछ, अनि मलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा पो त्यस्तो भनेका रहेछन्।
रक्सीले छालामा पनि असर गर्छ भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर यसले जति भित्री अंगमा असर गर्छ त्यत्तिकै असर छालामा पनि गर्छ । हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ, रक्सीले विशेसगरी कलेजो तथा प्याङ्क्रियाज नामक ग्रन्थी तथा मुटु, नशा जस्ता अंगमा असर गर्नुका साथै शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कम गर्छ । प्रस्तुत लेखमा रक्सीले छालामा गर्ने असरको बयान गरिएको छ ।
सामान्यतयाः रक्सीले छालामा गर्ने असरलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ, जस्तै यसले प्रत्यक्ष गर्ने असर, रक्सीले भित्री अंग खराब गरेर देखिने असर र रक्सीको सेवनले बढाउने छालाका बिरामीहरु ।
मुख्यतया रक्सी सेवन गर्नाले सिधा छालामा गराउने समस्या निम्न छन्ः
- छाला अत्यधिक सुक्खा हुने
- शरीरभरि चिलाउने समस्या हुने
- पैताला र हत्केला रातो भइरहने
- अनुहार रातो भइरहने
- छालाको क्यान्सर
- अनुहार तथा हातको छाला कालो हुने
- नङमा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिने
- घाँटीको विभिन्न ग्रन्थीको सुजन
छालाको पुरानो बिरामी जसलाई रक्सीले झन् बढाउँछ जस्तैः
सोरयासिस : रक्सीको अधिक सेवनले यो रोगलाई बढाउने मात्र नभई उपचारमा प्रयोग हुने औषधिलाई पनि कम उपयोगी बनाउँछ ।
रोजेसिया : रक्सीको सेवनले यो रोगका बिरामीको अनुहार खानेबित्तिकै एकदम रातो हुने हुन्छ । रक्सी खानेबित्तिकै वा केही समयमा अनुहार रातो हुने हुँदा यो समस्या भएका बिरामीले रक्सी नै खान छोडेका उदाहरण पनि छन्।
कपालमा आउने चाया।
रिङ एलर्जी (नमुलर इक्जेमा)
रक्सीको असरले भित्री अंगमा खराब गरेपछि देखिने समस्याः
- पोषक तत्वको कमीले हुने समस्या।
- पेल्लाग्रा : घाँटी, हात र खुट्टामा आउने एलर्जी।
- मरास्मस र क्वासीवर्करमा जस्तो छालामा आउने समस्या।
- जिङ्कको कमीले कपाल झर्ने छाला सुक्खा हुने समस्या पकुवा घाउहरु विभिन्न ठाउँमा आउने समस्या।
- संक्रमण : शरीरको रोगसँग लड्ने झमता कम गराई विभिन्न ठाउँमा किटाणुहरुको संक्रमण बढाउँछ।
- कलेजोको सिरोसिस : यो समस्यामा विभिन्न ठाउँमा रगतका साना नलीहरु देखिने, हातखुट्टा, अनुहार रातो हुने, शरीरभरि चिलाउने, पुरुषको स्तन बढ्ने, जन्डिस हुने जस्ता समस्या देखिन्छन्।